Waaqeffannaa - Wikipedia
Amantii Waaqa tokko amanuu Oromoo
Waaqeffannaan sirna amantii Waaqa tokkichatti amanuu fi lubbu qabeessi hundi isaan uummamuu fudhachuu dha. Waaqeffanaan amanii sanyii Kuushi hundaa ti, Oromoos dabalatee. Oromoonni waggaa kuma hedduudhaaf waaqeffannaatti bulaa turan.
4 Ayyaanota Eebba
7 Seemaa (divine law)
9 Liinkii alaa
Akka Waaqeffannaatti, uummama hundaaf, Waaqni Ayyaana kenneeraaf. Ayyaanni Waaqaa fi uumama gidduutti akka riqichaatti ilaallama, akkasumas fedhii Waaqaa akka isaanitti agarsiisuutti fudhatama. Ayyaantuun nama Ayyaana wajjin dubbachuu danda'uu fi amantoonni seera, duudhaa fi qabeenya Waaqaa akka eeganiif geggeessummaa kennani. Waaqni uumamuu fi jiraachuu Ayyaana, lubbu-qabeessaa fi lubbuu-dhabeessaa, wantootaa fi al-wantoota hundaa too'ata, akkasumas madaallii Waaqaa fi lafaa sirreessa.
Waaqeffannaa keessatti, Waaqayyoo namoota waliin kan walqunnamu karaa ayyaanaati. Dureewwan amantii akka bakka bu’oota Waaqaatti ilaalamu. Akka Waaqeffannaatti, Waaqayyo ayyaanota kana laggeen, tulluuwwanii fi mukkeen guguddoo keessa kaa’eera. Kanaaf bakkeewwan ayyaanonni jiraatan lafa eebbifamoo fi kabajamoo jedhamanii amanamu. Bakkeewwan eebbifamoon kunneen bakkatti namoonni amantii itti gaggeeffatan, wareeggatanii fi Waaqa itti kadhataniidha.
Ayyaaneffataa Oromoo keessatti, ayyaanota amantii baay'eetu jira.
Barruu Guddaa Moggaasaa
Ammachiisa guyyaa itti daa'ima reefu dhalatte maqaa moggaasanii fi eebbisani. Kunis maqaa moggaasaa jedhama.
Boorantichi (Nabi/Booranticha) Ayyaana warri abbootii (ayyaana dhiira warra mana bahee) waggaa keessatti yeroo tokko akka amantiitti maatiin ykn balballi tokko qe’ee angafaatti walgahee kabajudha. Guyyaa kabajaa ayyaana kanaa mijuu fi dhangaan qophaahu gosa adda addaatu jira. Yeroo fi akkaataan itti kabajamu naannoo naannootti xiqqoo addummaa qabaatus jifuu fi duudhaan guutamuu qabu tokkuma.
Barruu Guddaa Ateetee
Ateeteen ayyaana haadhaati. Ayyaana dubartii fi hormaataati. Oromoon kan dhugeeffatu, Ateeteen ayyaana sanyii fi hormaataa kan dubartiin facaafattu. Dubartiin ayyaana kana kan facaafattu ayyaanni haadha ishee, isheefis tolee akka dhala ishee qajeeluuf uumamaan Waaqa kadhatti. Ateeteen Saddeetatti kabajamti. “Saddeettan Ateetee jedhama”. Kana jechuun waggaa lamatti al tokko kabajamti. Birraa keessa ykn yeroo midhaan (jarmiin) alaa walitti qabamee galu, ykn Arfaasaa yeroo roobni roobee margi dagaagee loon quubse, ykn yeroo sanyiin faca’uu jalqabu ta’a. Ateeteen Loon mataa ishii qabdi. Loon Ateetee jedhamu. Dhadhaa finnan loon sanaatiin sirna Ateetee bulfatu. “Waan hundi Faanshoo Ateeteeti” jedhu’ Ateeten ayyaana hormaataa haa taatu malee, irra jireessi Ishii bal’inaan aadaa calaqqisiisa.
Wadaaja jechuun firummaa, aantummaa, wal mararfachuu, walii yaaduu, walii birmachuu jechaadha. Kanas warra ykn maatii tokkotu bulfata. Guyyaa kana ayyaantuu warra dhahaa fi faaruu ayyaana kanaa beekan afeeruun Waaqa isaanii kadhachaa, faarfachaa, galateeffachaa bulu. Ayyaanni kun bakka tokko tokkotti ayyaana ” jaalaa” ni jedhama. Ji’a ji’aan ta’uu danda’a, Waggaatti ala lama ykn tokkos ta’uu ni danda’a.
Irreechi sirna aadaa Oromoo gamtaadhaan tulluu fi malkaa irratti ba’anii waaqa kadhatanii, faarfatanii fi galateeffatan. Karaa biraatiin Irreecha yemmuu jennu hiika (yaada) birootis niqaba. Kunis marga ykn coqorsa sirna ayyaaneffannaa tokkoof ykn araaraaf yoo deemamu harkatti qabatamus ni ibsa. Akkasumas hiikoo gara warra waa beeku bira deemanii namaaf himamu tokkoof kaffaluu (galchuu) ta’uu danda’a. Akkasumas Irreessa jechuun aangessuu jechuus nita’a. Ayyaanni Irreechaa waggaatti yeroo lama Birraa fi Arfaasaa kabajama.
Ayyaanni kun ayyaana ijoollee dhiiraa kan ganni isaanii waggaa 16 gadii ta’an waggaatti altokko kabajani. Guyyaa ayyaana kanaa mijuu fi cunqoo qophaa’eef erga soorratanii eebbifatanii booda dirreetti waliin bahuun Qaccee dhukaasu ykn wallaansoo taphatu. Yeroo fi akkaataan ayyaanni kun bakka adda addaatti kabajamu gargari ta’uu nimala. Kanaaf qorannoo barbaachisa.
Ayyaani kun ayyaana ijoollee dubraati. Waggaatti yeroo tokko walitti dhufanii ayyaaneffatani. Guyyaa jala bultii ayyaana kanaa dubri ollaa waliin miidhagdee gara lagaa ykn dirreetti bahuun gosa margaa Qunnii jedhamu buqqifatu. Yeroo dhaqaa fi galaa sirboota ykn wallee wallisan niqaban. Galgala isaa Qunnii buqqifatanii manatti galan sana battee dhahu. Inni dhahame kun Ingiccaa jedhama. Ganama isaa ingiccaa kana akkuma duraa gurmuun waliin ollaarra deemuun Ingiccaa utubaa ykn gorroo manaatti hidhu. Yeroo kana dhangaa adda addaa afeeramuun dhadhaas muudamanii eebba fudhatu. Xumurarra Galma Ayyaanaa ykn waltajjii tokkotti walgahanii gamtaan sirna ayyaana kanaa sirbaa fi wallee gara garaan kabajanii oolu.
Ayyaanni kun ayyaana looniin beekama. Bakka tokko tokkotti ammoo akkuma ayyaana biraatti fudhatama. Gara Maccaatti akkitti beekamuu fi Tuulama keessatti akkasumas naannoo gara kibbaa fi bahaatti adda adda ta’uu danda’a. Guyyaa ayyaana kanaa mooraa looniitti marqaa marquun itti facaafatanii hormaata isaaniif eebbisu. Akkitti waanti kun raawwatu hedduu fi bal’aadha. Guyyaa kana Qillee fi Gugsii fardaa taphachuunis ni beekama.
Kana malees ayyaanotii guyyaa lafaa (ayyaana dachii), guyyaa sanyii (jaarii) fi kkf hedduun kan maqaa hin dhahiin godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti yeroo adda addaatti kan kabajaman nijiran.
Kanas ilaali: Eebba Waaqeffannaa
Oromoo Waaqeffattoonni gaafa ayyaanota adda addaa kabaju Waaqa galateeffachuu fi waaqeffachuuf ni eebbisu. Kunis waqtiilee adda addaatti geggeeffama. Eebbifannaanii fi Waaqeffachuun hojii Waaqeffannaa keessaa tokko.
Akka ijoollee keenyaa eebbisuuf abba keenya gaafanna.
Yaa Waaq kan dubbatee nu dubbachiisu fi kan hamaa nutti yaadu nurraa qabbi.
Yaa Waaq mirga nu oolchi; hamaa nurraa qabi.
Yaa Rabbii, ilmi ga’e haa fuudhu, dubarri geesse haa heerumtu.
Yaa Waaq, ani galee, kan galee hin rafne narraa qabi; ani rafee kan rafee hin bulle narra qabi.
Yaa Waaq tolaa nutti qabi, hamaa irraa nu eegi
Oromoon ayyaana eebbaa baayyee qaba. Oromoon waan jireenya isaa wajjin walqabatu hundumaa ni eebbisa. Fakkeenyaaf:
Ukee/taaboree - eebbaa fi ayyaana ijoollee
Ingiccaa - ayyaana ijoollee durbaa
Ayyaana abbaa - dhaala gaarii isaanirraa waan arganneef abbootii galateeffachuu
Ateetee - dubartoota eebbisuuf
Borantichaa - namoota gurguddaa eebbisuuf
Jaarii looni - loon eebbisuf
Jaarii qe’e ykn jaarii kosii - naannoo jireenya ykn qe'ee eebbisuuf
Jaarii midhaani - midhaan eebbisuuf
Garanfasa mucucoo - dhufaatii gannaa fi rooba ayyaaneffachuu
Gubaa fi irreechaa - ganni darbee birraan dhufuu ayyaaneffachuu
Cubbuun ni qabdi (sin has got consequence)
Cubbuun ni sirriqxi (the consequence of sin can be inherited)
Cubbu abbaatu eeggata or cubbuu irra abbaatu uf eega (everyone should keep him-/herself from committing sin and everybody is responsible for the consequences of the sin he/she commit)”
Gatiin cubbuu asuma jireenya isa ammaarratti nama ga'a, jireenya isa du'a boodderratti odoo hin taane. Waaqayyo namoota cubbuu hojjatan adabuuf sihoolin inni qopheesse hin jiru.
Oromoonni waaqaeffattoonni hammeenyi fi rakkinni lafa kanarratti namarra ga'u sababa hojii yaraa namoonni hojjatanii fi murtii dogogoraa isaan murteessanirraa kan ka'e dhufa jedhanii amanu, kana jechuun bu'aa cubbuu namoonni hojjataniiti jechuu dha.
Hojiiwwan gimbii keessatti hojjataman keessaa:
dalaguu ykn jeekkaruu (dancing or spiritual songs),
irreessa kennuu (green leaf the symbol of fertility as a gift),
hammachiisaa (blessing babies),
gashaa ykn galchaa (delicious food brought to gimbi), etc.
Seemaa (divine law)Edit
The Seemaa provides guidance not only on ‘religious matters,’ but addresses every aspect of life, including issues of social justice, politics, trade, international relations, family life, domestic and wild animals’ rights, ecosystem.
Seema prohibits lying, stealing, cheating, betraying, dishonesty to one’s parents and to one’s fellow human beings, drugs, alcoholism, gambling and exhibition of unethical and immoral behaviours against the prescribe social norms among others.
ODAA: Bakka Waaqni hariiroosaa nama wajjin ittihaaromsate, dhumarratti kan baname Mudde 11, 2014
Budizimii | Hinduuyizimii | Judaayizimii | Waaqeffannaa | Islaamaa | Kiristaanummaa
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Waaqeffannaa&oldid=33001"
Last edited on 18 Haggaya 2020, at 05:41
This page was last edited on 18 Haggaya 2020, at 05:41.